Ku dheji barta Blogs | Martech Zone
Arbaco, Juun 5, 2006 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Forbes.com - Xumbada MySpace
Dhowr qoraal oo xiiso leh oo ku saabsan qaraxa baloogyada. Sida 'xumbo' kasta, dadka waaweyni waxay horay uga hadlayaan 'dilaaca'. Qaadashadayda shakhsi ahaaneed waa in Nick Denton uusan ka helin 'caajis bogagga', wuxuu ku sii xumaanayaa bogagga xun sida ilaha dakhliga. Blogs waxay sii wadi doonaan inay horumariyaan waqti ka dib waxayna ku milmaan dhinac kasta oo ka mid ah shabakadda. Si kastaba ha noqotee, sida websaydh kasta, nuxurku waa inuu ahaadaa boqor. Hadaadan qorin wax kafiican ninka xiga, dadka waa wey caajisaan oo wey baxaan.
Shirkadaha sida Mr. Denton ee u adeegsanaya baloogyada ilaha dakhliga, tani waxay ka dhigan tahay in gelitaan kasta oo baloog ah loo baahan yahay inuu noqdo dilaa. Waxaa jira khatar aad u weyn oo ku lug leh dakhliga khamaarka ee nuxurka - gaar ahaan markay jiraan balaayiin bogag ah oo mawduucyo ah.
Lacag ugama dhigin lacagta (waxba ma cunayo haddii aan cuno). Saas ma aha, waxaan blog u la xiriiraa asxaabta, qoyska, iyo xirfadleyda kale ee warshadaha. Halkani waa goob aan ku wadaago fikradayda oo aan kaga hadlo fikradaha dadka kale. Waxay i siisaa soo-gaadhis iyo weydiisashada ra'yi-celinta kuwa aan ixtiraamo.
Tags: ku dheji boggagabloghubkaaForbesMySpaceNick dentonxumbada myspace